Imigodi yomlilo yangaphandle ukunikeza ukufudumala kuvulandi noma ingadi yakho | Bezzia
UMaria vazquez | 13/05/2022 18:00 | Izesekeli zasekhaya
Ingabe uphakamise ekupheleni kwehlobo eledlule ukuthi kulo nyaka uzolungisa izindawo ezingaphandle? Qala ukuhlanganisa izici ezingagcini nje ngokungeza ubuntu kubo kodwa futhi ezibenza basebenze kakhudlwana. Izinto ezifana imigodi yomlilo yangaphandle ukuthi siphakamisa namuhla.
Ama-braziers ayilokho kanye okufunayo ukuze ukwazi ukunweba isikhathi osisebenzisa ngaso ingadi yakho noma ivulandi. Ziyi-sculptural emini futhi zenza izindawo zangaphandle zibukeke ukufudumala ngobusuku obupholile Kwehlobo. Vumelanisa usayizi nesitayela sakho endaweni yakho yangaphandle futhi wenze umehluko!
1 Izizathu zokufaka i-brazier endaweni yakho yangaphandle
2 Izinhlobo ze-brazier
3 I-Metallic enomumo oyindilinga
4 I-Stone bioethanol braziers
Izizathu zokufaka i-brazier endaweni yakho yangaphandle
Ingabe kukhona okushodayo endaweni yakho yangaphandle? Kwesinye isikhathi siba nalowo muzwa kodwa asicaci kahle ukuthi yini okumele siyihlanganise ukuze unyamalale. Umgodi womlilo ungaba yilokho okufunayo- Yiqiniso, kunezizathu eziningi zokufuna ukuhlanganisa eyodwa ekwakhiweni kwakho kwendawo yangaphandle:
Ivumela ukusebenzisa ngokunenzuzo izindawo zangaphandle futhi ku ubusuku obubanda kakhulu basehlobo.
Khanyisa amavulandi nezingadi ebusuku, inikeza ukukhanya okuseduze nokufudumele.
Ziba yisici lapho qoqa umndeni.
Bangeza ubuntu nokufudumala kumklamo wangaphandle
Abashisa izinkuni noma amalahle Zingasetshenziswa njenge-grill. Eqinisweni, imiklamo eminingi ihlanganisa eyodwa.
Singahlukanisa ama-brazier ngokuya ngezinto ezenziwe ngazo noma umumo azithathayo. Sinqume, nokho, ukubheja ku-hybrid sigqamisa izinhlobo ezidume kakhulu zama-brazier, zombili lezo okuzoba lula kuwe ukuzithola.
I-Metallic enomumo oyindilinga
Emini baziphathisa isithombe esibaziweyo engadini futhi ekushoneni kwelanga baba yi-brazier, ibenze babe ucezu oluhle kakhulu lokuhlobisa ithala lakho, i-patio noma ingadi. Imigodi yomlilo embozwe ngempushana emnyama inhle ngokwendawo, nakuba kuyimiklamo ene-oxidized efaneleka kakhulu ukuphendulela amakhanda futhi yengeze ukuthinta kwe-avant-garde kuleso sikhala esingaphandle.
Ama-brazier ensimbi anesimo esiyindilinga afaneleka ngokukhethekile ukuhlobisa izindawo ezincane zangaphandle njengoba uzothola imiklamo esuka kumasentimitha angu-51 ububanzi ezokwenza kube lula kuwe ukuyivumelanisa nalena. Uzodinga, yebo, enye indawo encane yokugcina izinkuni ozozishisa kuzo.
Enye inzuzo okufanele icabangele ama-braziers ensimbi ukuthi anjalo kufinyeleleke ngokwezomnotho; ungazithola kusukela ku-€150. Ngaphezu kwalokho, zilula kunezinye izindlela, ezizokuvumela ukuthi uguqule izindawo lapho udinga ukuzisebenzisa ngenye indlela.
I-Stone bioethanol braziers
I-silhouette yesimanje kanye nemigqa ehlanzekile yemigodi yomlilo yamatshe izokwengeza isitayela kunoma iyiphi indawo yangaphandle, enkulu noma encane. Ukusetshenziswa kwe bioethanol njengoba uphethiloli, kuzokwenza ukuthi ukuyisebenzisa kube lula futhi kuhlanzeke.
Ungathola lolu hlobo lwama-brazier umumo oyindilinga noma ongunxande. Okwangaphambili kumnandi ikakhulukazi ezindaweni ezingaphandle ezinomoya okhululekile futhi ojwayelekile. Ama-rectangular ambozwe ngamatshe, okwamanje, ahlinzeka ngobuhle obuyinkimbinkimbi.
Kungakhathaliseki ukuthi ziklanywe kanjani, lezi zindawo zomlilo zangaphandle agcwele amatshe usebenzisa kokubili usayizi nombala walezi ukudlala ngesitayela. Lawa matshe ahloselwe ukufihla isishisi ukuthi, ngaphezu kwe-biotenaol, singasebenza namanye amafutha. Iningi lama-brazier anesiqalo semanuwali, kodwa kungenzeka futhi ukutholakala ngokuqala kukagesi. Ngaliphi inani? Okukodwa, okukhethekile kakhulu.
Ngaphandle eyenziwe ngokhonkolo noma ngamatshe, lawa ma-brazier asindayo kunama-brazier ensimbi. Ezinkulu zenzelwe ukuthi zibe ne- indawo emisiwe engadini, ngakho-ke kuzodingeka ucabange ngokucophelela ukuthi ungawafaka kanjani ekwakhiweni.
Amanye amabhentshi aqhubekayo, amanye amasofa engadini noma ezinye izihlalo ukuzungeza i-brazier yangaphandle futhi ulungise indawo yakho yangaphandle. Ngeke udinge okwengeziwe ukuze ujabulele ubusuku basehlobo. Nethezeka ekukhanyeni kwenyanga noma uchithe isikhathi nomndeni nabangane ubusuku basehlobo eduze komlilo nomlingo wakhe.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Umhlobiso » Izesekeli zasekhaya » Imigodi yomlilo yangaphandle ukunikeza ukufudumala kuvulandi noma ingadi yakho
Izitayela ezinhle zokuhlobisa umshado 2022